ओलीलाई ‘आउट’ गरेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री ! झलनाथ खनालले गरे सनसनीपूर्ण खुलासा::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
ओलीलाई ‘आउट’ गरेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री ! झलनाथ खनालले गरे सनसनीपूर्ण खुलासा
काठमाडौँ- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले एकतापछि वरियातामा आफूलाई अन्याय गरिएको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।
प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्मा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै खनालले वरियतामा अध्यक्षद्धय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालपछि आफ्नो स्थान हुनुपर्ने दावी गरेका हुन् । पार्टीभित्रको इतिहासअनुसार ओलीभन्दा पनि आफू सिनियर भएकोसमेत खनालको दावी थियो ।
सोमबार सम्पन्न जिल्ला तहको एकता घोषणाप्रति पार्टीभित्रै धेरै असन्तुष्टी नरहेको पनि खनालले बताएका छन् । कार्यक्रमको बिचमै उठेर हिँडेका अर्का नेता माधवकुमार नेपाल पनि सन्तुष्ट नै रहेको खनालले बताए ।
बाहिर चर्चा भएजस्तो नेपालको असन्तुष्टी नरहेको खनालको जिकिरि थियो । फरक प्रसंगमा खनालले ओली पछि अर्का अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने संकेत पनि गरेका छन् ।
तर नेपालले कार्यक्रममा आफूले सम्बोधन गर्न नपाएपछि असन्तुष्ट भएर कार्यक्रमको बिचमै निस्किएको पाइएको छ । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई मात्रै सम्बोधन गर्न दिएकोमा असन्तुष्ट बनेका नेपाल कार्यक्रममा पुरै समय नबसेका हुन् ।
नेपालले पार्टीभित्रै आफूलाई अपहेलना गरिएको महसुश गरेर सांकेतिक विरोध गरेका हुन् । अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग यस विषयमा कुरा गर्दा आफूसमेत छक्क परेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । जिल्ला तहको एकता सहमतिमै गरिएको भए पनि कार्यक्रममा उचित महत्व नदिएपछि नेपालको अर्को असन्तुष्टी पोखिएको छ ।